Dawlada Farmaajo oo ku ceebowday socdaalkii Nairobi iyo Jamaal, Fowsiyo iyo Cabdi Siciid oo habeen dhax | Goojacade
Home War Dawlada Farmaajo oo ku ceebowday socdaalkii Nairobi iyo Jamaal, Fowsiyo iyo Cabdi...
Dawlada Farmaajo oo ku ceebowday socdaalkii Nairobi iyo Jamaal, Fowsiyo iyo Cabdi Siciid oo habeen dhax
Shalay subax waxaa magaalada Muqdisho lagu soo celiyey ku-xigeenka wasiirka tamarta iyo biyaha Cusmaan Liibaan, Senatorada Ilyaas Cali iyo Zamzam Daahir, kuwaas oo xalay ku baryey garoonka JKIA.
Saraakiishan ayaa ka mid ahaa wefti Dawlada Federaalka ka socday oo shir NGO ugu yeedhay ku lahaa Magaalada Nairobi, nasiib darose masuuliyiintan ayaa loo diiday in la siiyo Viisihii dal ku galka, taas oo daba socota cadaadis ay Dawlada Kenya ku doonayso inay ku xoogto badda Soomaaliya ee ay ku muransan tahay.
Markii Masuuliyiintii Dawladda Federaalka la bah dilay oo loo diiday in Baasaboorkoodii Dublemaasiga ahaa Viiso loogu dhufto, ayaa waxaa Baasabooradoodii ajaanibta ahayd la soo baxay oo Viiso loogu dhuftay Wasiirrada Qorsheynta iyo caafimaadka Jamaal Xasan iyo Fowsiyo iyo la-tilaya amniga ee Farmaajo Cabdi Saciid, iyagoo goobtii kaga dhaqaaqay masuuliyiintii kale oo shalay subax Muqdisho lagu soo celiyey.
Ayaandaro Jamaal, Fowsiyo iyo Cabdi Siciid ayaa halkii ay ka ilaalin lahaayeen sharafta dalka Soomaaliya dhuuntay oo door biday habeen dhax ay siinayaan NGO-yada Nairoobi ku sugani.
Falkan fadeexada ah ee Wasiiradii Federaalka ku bedesheen sharaftii Soomaaliya waxay ku tusaysaa qiimaha iyo maqaamka Xukuumada Federaalka Soomaaliya oo maalin walba hoos u sii socda, sidoo kale isku xir laâanta Xukuumadda.
Madaxweyne Farmaajo iyo Raiisalwasaare Kheyre waa inay shaqada ka caydhiyaan Wasiirrada Qorsheynta iyo caafimaadka Jamaal Xasan iyo Fowsiyo iyo la-tilaya amniga ee Farmaajo Cabdi Saciid.
Previous articleKenya maxaa karka ka keenay?
Next articleDowladda Soomaaliya oo jawaab gacan ku-gabbad ah siisay Kenya